Caruurta Tuulada Nubunikavula Ma Kaftamayaan
Aus, 10 Nov 2012 (Alldhooftinle.com)
Bal ka warran adiga oo yar oo shan jir ah oo caga cad oo maalin walba malcaamada ama dugsiga iyo gurigiina u kala lugeynaya shan saacadood in ka badan!
Caruurta tuulada Nubunikavula ma kaftamayaan, iyagoo caga cad ayey waaberiga soo gaadhaan halkey baska dugsiga ka raaci lahaayeen.
Mushkiladdaasi waxay haysataa dadka ku nool Tuulada Nubunikavula ee Wadanka Fiji oo ciyaalkooda maalin walba afarta habeenimo (4 AM) iyadoo dunidu tahay gudcur ayaa la kiciyaa, ilaa dugsiga sare ay ka dhammeynayaana xaaladaas ayey ku sugnaadaan.
Ciyaalkaasi waxay gudcurkaa u guureynayaan, ilaa laba saacadood iyo dheeraad, si ay u gaadhaan waqti munaasib ah halkay ka qabsan lahaayeen buska geeynaya dugsiga caruurta iyo dugsiyada kaleba.
Ardadaasi hadhowtana markay soo rawaxaan intii intey subaxii lugeynayeen in le'eg ayey haddana dib ugu soo lugeeyaan ilaa ay guryahoodii ka soo gaadhayaan.
Tuulada Nubunikavula ee Wadanka Fiji oo ah meel Buuraley ah oo ay degan yihiin dad Shaqaale ahi hodanna ku ah midhaha iyo beeraha sonkorta ayaa waxa dhibaato weyni ka haystaa wadooyinka iyo basaska ay u raacayaan meelaha ay Iskuulada u tagaan iyo weliba cusbitaalka oo ay isna u lugeeyaan dhawr saacadood.
Ardaydan ayaa qaarkood waxay guryahooda ka soo baxaan ilaa iyo afarta subaxnimo (4 AM) si ay u qabsadaan 6da subaxnimo baska soo mara meesha ugu dhow oo ku taal Vunicuicui .
Caruurahan oo da'doodu u dhexayso 5 sano ilaa 17 sano ayaa ah kuwo keligood lugeeya inta badana aaney la socon waalidkooda waqtiga madow ee habeen badhka ah ee ay guryahooda ka soo baxaan, sababtoo ah waalidkuna waxay u dareeraan xaga beeraha oo maalin nololeedkoodu ku xidhan yahay.
Ardadu waxay dugsiga gaadhaan iyagoo daalaan, dabadeedna waa gataati-dhacaan oo luloodaan daal awgii. Sidaas ayey ku jiraan ilaa ay ama ka cararaan ama dhammeyaan dugsiyadoodaa.
Ardayda qaar baaba ku dooda iney lugeyntaa badan ee sanadaha soconeysa ka helaan jimicsi iyo adkaysi jidhka ah, qaarna markay dhamaystaan Dugsiga Hoose/Dhexe bayba Iskuulkaba ka tagaan, iyagoo isla markaana dareemay sida Cagahii u dildilaacaan.
Dadku waa kala maane qaar kale oo nimcada basaska iyo dugsiyo u dhow haysta ayaa ku fekera iney ciyaalkooda halkaa u diraan si ay rag ugu soo noqdaan.